Hongbin ဘာကြောင့် VIXX အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့တာလဲ? | News Bar Myanmar
Hongbin ဘာကြောင့် VIXX အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့တာလဲ?
Hongbin ဟာ ခုဆိုရင်တော့ VIXX အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီး VIXX အဖွဲ့အနေနဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၅ ယောက်နဲ့ပဲ ဆက်လက်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်တော့မှာပါ။ ဩဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့မှာပဲ Jelly Fish Entertainment မှ ဒီသတင်းကို ထုတ်ပြန်သွားခဲ့တာပါ။
” မင်္ဂလာပါ။ Jelly Fish Entertainment ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို VIXX ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် Hongbin နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းထုတ်ပြန်လိုပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ VIXX အဖွဲ့ကို အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါစေ။
ဒီလို စိတ်မကောင်းစရာသတင်းကို ပြောရတဲ့အတွက်လည်း တကယ်ကို ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ဩဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့မှာပဲ Hongbin က VIXX အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်လိုတဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ Hongbin နဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Hongbin ရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားပြီး အဖွဲ့မှာနှုတ်ထွက်ခွင့်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ယခုအချိန်မှစပြီး VIXX အဖွဲ့ဟာ အဖွဲ့ဝင် ၅ ယောက်နဲ့ပဲ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်သွားတော့မှာပါ။
VIXX အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း ဆက်လက်ပြီးတော့ အားပေးချစ်ခင်ကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” လို့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Hongbin ဟာ VIXX ရဲ့ Visual member ဖြစ်ကြီး အားပေးမှုတွေ ရရှိထားတဲ့ အဖြွါဝင်တစ်ယောက်ပါ။
ဒါဆို ဘာ့ကြောင့် Hongbin တစ်ယောက် VIXX အဖွဲ့ကနေ နှုတ်ထွက်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တာလဲ? Hongbin ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီိလက သူ့ရဲ့ Live broadcast တစ်ခုမှာ အခြား Idol အဖွဲ့အချို့ရဲ့ သီချင်းတွေကို ဖွင့်ပြပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
ကိုယ်တိုင်လည်း Idol တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ Hongbin အနေနဲ့ ဒီလို ဝေဖန်မှုတွေ မလုပ်သင့်လို့ လူအများအပြားက ရှုံ့ချခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Hongbin ဟာ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့ ဝေဖန်မှုများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး Jelly Fish Entertainment နဲ့ Hongbin မှလည်း စိတ်ပျက်ခဲ့သူများအား တောင်းပန်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
K-Pop Group ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိလုပ်လိုက်တဲ့ အပြုအမူဟာ မိမိသာမက မိမိရဲ့ အဖွဲ့ဝင်များအပေါ်ပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ဟာ ယခုလို Hongbin အဖွဲ့မှနှုတ်ထွက်ခဲ့ရတဲ့ အခြေခံအကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၅ ယောက်ပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ VIXX အနေနဲ့လည်း Visual member တစ်ယောက်ဖြး်တဲ့ Hongbin ကို ဆုံးရှုံးရမှုဟာ ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။ VIXX အဖွဲ့ရော Hongbi ရော ရှေ့ဆက်ရမယ့် လမ်းခရီးမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။
Next နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ်ပြီး နောက်ဆုံးပိုင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေ သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ Backstreet Rookies »
Previous « ယောက်ဖဖြစ်သူ Kim Min Joon အတွက် နှစ်ခုမရှိနိုင်တဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ G-Dragon